यि ११ कारणले महिलाहरुमा यौन उत्तेजना बढ्छ (भिडियाे सहित) - Lekbesi Khabar
यि ११ कारणले महिलाहरुमा यौन उत्तेजना बढ्छ (भिडियाे सहित)
अधिकांश पुरुष यौन सक्रियताका बेला माहिलाहरूलाई उत्तेजित गर्न तिनका एक वा दुई शारीरिक अंगमै बढी केन्द्रित हुन्छन् तर महिलाका शरीरमा कैयन् त्यस्ता अंग छन् जहाँ स्पर्श मात्र गर्दा पनि उनीहरूमा कामेच्छा जागृत हुन्छ । महिलाको विभिन्न भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छ। त्यसैले जस्तै महिलाहरु पनि स्पर्श पछि कामोत्तेजक हुन्छन् र यौन सम्पर्क गर्न तयार हुन्छन् ।
४. गर्दनको पछाडिको भाग
गर्दन पछाडिको भागमा केश रेखाको ठीक मुनिदेखि लिए कानपछाडिको भागसम्म अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यो हिस्सामा स्पर्श वा चुम्बन गर्नाले
महिलाहरूमा कामोत्तेजना जागृत हुन्छ र उनीहरूले यौनसम्पर्कमा पर्याप्त आनन्द प्राप्त
५. आँखाको परेला
पिठ्युँ पनि पर्याप्त संवेदनशील हुन्छ । यहाँ चुम्बन गर्नाले महिलाहरू उत्तेजित त हुन्छन् नै साथै उनीहरूको तनाव पनि कम हुन्छ । यौनमा सक्रिय बनाउन यो स्थानमा आफ्नो मुहार रगड्नुपर्छ । एजेन्सी
११ माघ २०७६, शनिबार १२:४६ January 28, 2020
मनकारी मेयर : जसले एक बृद्धकाे ऋण तिरिदिए, अनि कोट फुकालेर लगाइदिए
धादिङ समाज दक्षिण कोरियाको अध्यक्षमा मनोज थापा
चीनको वुहान लकडाउनमुक्त